Dhowr qof ayaa ku dhimatay qarax Guriga lagu diyaarinayay Muqdisho [Sawir hore]
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan qarax xoog leh oo caawa fiidkii salaadda maqrib kadib ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa ahaa mid lagu diyaarinayay guri ku yaalla Xaafada Oodweyne ee degmada deeyniile, isla waxaana uu geystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac, sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen GO.
Inta la xaqiijiyay 3 ruux oo ay ku jiraan Canug yar iyo Haweenay kuwaasi oo kamid ahaa dad shacab ah oo ku sugnaa Guriga lagu diyaarinayay qaraxa, iyadoo aan la ogeyn in kuwaasi diyaarinay ay kamid yihiin.
Wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaraha dhimashada ay tahay 4 qof, sidoo kalena ay jiraan ku dhawaad 5 kale oo dhaawacyo kala duwan uu kasoo gaarey qaraxan oo ahaa mid culus oo laga maqlay qeybo kamid ah Muqdisho.
Saraakiisha amaanka degmada iyo kuwa Nabad Sugida dowladda ayaa la wareegay Guriga uu qaraxa lagu dhex diyaarinayay, iyadoo wali aan fahfaahin laga bixin natiijada baaritaanka ciidamada ay sameeyeen.
Dadka ku dhawan xaafadda Oodweyne ayaa soo food-saartey casbi xooggan kadib qaraxii caawa, iyadoo Deyniile ay kamid tahay meelaha xubnaha Al Shabaab ay sida aadka ah ugu dhex-dhuumaalaystaan.
Jugta qaraxa ayaa laga maqlay meel ka fog goobta, iyadoo uu si dirqi ah uga badbaaday...
Dabley muwaadin British ah ku dishay Nigeria, dad kalena qafaashay 22.04.2019. 06:59
Dibadbaxayaasha Suudaan oo xiriirka u jaray guddiga milatariga 22.04.2019. 06:53
Khasaaraha weeraradii Sri Lanka oo korodhay xili ay Ajaaniib ku jiraan 22.04.2019. 06:44
Daacish oo sheegatay weerar ka dhacay Boqortooyada Sacuudiga 22.04.2019. 06:19
Majaajiliste Zelensky oo loo doortay madaxweynaha Ukraine 21.04.2019. 22:09
Somaliland oo beenisay in Muuse Biixi iyo Deni ay ku kulmeen Imaaraadka 21.04.2019. 20:47